December 24, 2019 kandai kanda 1
काठमाडौं, पुस ८ । १४ वर्षीया किशोरीले गत शुक्रबार स्कुलबाट फर्केर घरधन्दा गरिन्। गृहकार्य सकिन्। रात छिप्पिन थालेपछि अभिभावकले कुरैकुरामा फकाउँदै गाउँको एउटा घरमा लगे। त्यहाँ विशेष चहलपहल थियो। उनलाई मनमनै जिज्ञासा उठ्योे, किन यति धेरै मानिस भेला भएका? मलाई किन यहाँ ल्याइयो? केहीबेरमा थाहा पाइन्- त्यहाँ उनको […]
December 13, 2019 kandai kanda 1
काठमाडौं, मंसिर २७ । विज्ञान प्रयोगशाला र अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि पर्याप्त स्थान, उज्याला र चम्किला कक्षाकोठा साथमा आधुनिक बास्केट बल कोर्ट, पुस्तकालय र चमेना गृह। राणा शासनको सुरुमै १६६ वर्षअघि खुलेको दरबार हाइस्कुलको अहिलेको भौतिक अवस्था हो यो। नेपालमा आधुनिक शिक्षाको सूत्रपात गर्ने यो स्कुलमा त्यतिबेला राजपरिवार र […]
December 11, 2019 kandai kanda 1
काठमाडौं, मंसिर २५ । नक्कली परीक्षकका नाममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट २१ लाख १७ हजार भुक्तानी भएको छ। ०७५ असोजअघि डेढ वर्षमा नक्कली परीक्षक खडा गरी यो रकम हिनामिना भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले डेढ वर्ष अवधिमा […]
नयाँ दिल्ली । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले नागरिकता संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा संसदमा सोमबार बोल्दै नेपालीको प्रसंग समेत निकालेका छन् । उनले संसदमा बोल्दै सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानका आधारमा नेपालीले नागरिकता पाइरहेको बताएका हुन् । नागरिकता विधेयकको संशोधन भारतको तल्लो सदन लोकसभामा बहुमतले पारित गरिएको थियो । विधेयकमा […]
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै नेकपाभित्र अब सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। सभामुख निर्वाचनको विषयलाई अधिवेशनको पहिलो कार्यसूची बनाउने तयारीसहित भावी सभामुखबारे छलफल सुरु भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले लेखेकी छन्। आउँदो पुस ४ गते हिउँदे अधिवेशन सुरु […]
काठमाडौं। पौडीबाजि गौरिका सिंहले सागको एकै संस्करणमा सर्वाधिक तीन स्वर्ण जितेर कीर्तिमान बनाएको २४ घन्टा नबित्दै अर्को रेकर्ड बनाएकी छिन् । सोमबार थप एक स्वर्ण जित्दै उनले सागमा चार स्वर्ण जित्ने एक मात्र नेपाली खेलाडी दीपक विष्टको कीर्तिमानमा बराबरी गरेकी हुन् । तर, दीपक विष्टले गौरिकाले जस्तो एकै […]
काठमाडौं । बुधबार (आज) साँझबाट नेपाल प्रवेश हुने पश्चिमी वायुको प्रणालीका कारण उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा भारी हिमपात र वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । पूर्वानुमान महाशाखाले अधिकतम र न्युनतम तापक्रममा गिरावट आइ देशैभरी चिसो बढ्ने र यो प्रणाली बिहीबार अझै सशक्त हुनेसमेत […]
यी हुन् सागमा ४ स्वर्ण र २ रजत र ३ कास्य गरि कुल ९ पदक जित्ने १७ बर्षीय नेपाली चेली
December 10, 2019 kandai kanda 1
काठमाडौ । पौडीमा सनसनी मच्चाइरहेकी गौरिका सिंह दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को ३५ वर्षे इतिहासमा एउटै संस्करणमा चार स्वर्णपदक जित्ने पहिलो नेपाली बनेकी छन् । पौडी प्रतिस्पर्धाको पाँचौ दिन सोमबार १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा भारतकी शिवांगी शर्मालाई उछिन्दै १७ वर्षीया गौरिकाले यो सफलता हात पारेकी हुन् । उनले […]
एजेन्सी । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई एक रिपोर्टरको मोबाइल खोसको आरोप लागेको छ । सोमबार, लन्डनको एक स्थानीय टिभी च्यानलका एक रिपोर्टरले उनलाई अस्पतालको भुइँमा रहेको एउटा बच्चाको तस्बिर देखाउन खोजेका थिए। तस्विरमा बच्चा सरकारी अस्पतालको वार्डमा रहेको अक्सिजन मास्कको छेउमा सुतिरहेको थियो। सुरुमा जोसनले तस्वीर हेर्न अस्वीकार […]
काठमाडौ । पत्रकार ऋषि धमलाकी श्रीमती एलिजा गौतमले श्रीमानको व्यस्तताले गर्दा आफुले समय नपाएको गुनासो पोखेकी छिन् । विवाह भएर दुई छोराछोरी भईसक्यो तर अहिले सम्म ऋषिसंग खुलेर समय बिताउन नपाएको कुरा क्यानाडा नेपालसंगको अन्तर्वार्तामा गुनासो पोखेकी छिन । छोरी एरिकाको हातको प्रत्यारोपण गर्न क्यानाडा पुगेर भर्खर नेपाल […]
यूएई – मंसिर १९ गते शुकमाया टमाटाको घर फर्कने टिकट थियो । झोला ठिक पार्न थालिसक्नुभएको थियो । १८ गते साथीसँग सामान किन्न बजार जानुभयो । बजार पुग्नेबित्तिकै उहाँ अचानक बे होस भएर ढल्नुभयो । साथीहरुले उहाँलाई अजमान स्थित खलिफा अस्पताल पुराए । भन्छन् नि जिन्दगीमा अगाडिको बाटो […]
काठमाडौं । १३ औं सागको समापन समारोहको खेलाडी मार्चपासमा नेपाली राष्ट्रिय झण्डा पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले बोकेकी छिन् । उनले १३ औं सागमा कीर्तिमानी ४ स्वर्ण जितिन् । पौडीमा व्यक्तिगत स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी उनले एकै संस्करणमा ४ स्वर्ण जित्दै नयाँ कीर्तिमान बनाइन् भने सर्वाधिक ४ […]
जनकपुरधाम : होटल राजदरबारमा खानका लागि राखिएको पानीको जारमा किरा भेटिएको छ। विभा बिभरेज्स प्रालिद्वारा उत्पादित भोडा पानीको जारमा किरा भेटिएको हो। होटलमा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमकै सहभागिका लागि राखिएको पानीको जारमा किरा भेटिएको हो। पानी खानका लागि ग्लासमा निकाल्दा किरा भेटिएको कार्यक्रमका […]
काठमाडौँ । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा नेपाल र भुटानको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा दशरथ रंगशाला बाहिर भने फुटबलप्रेमीहरु भीड लागेको देखिन्थ्यो । फुटबलप्रेमी दर्शकहरुको भीडले ट्राफिक व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएको थियो । दर्शकहरुले सडक बीचमै पलेटी कसेर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको ठूलो स्क्रिनमा फुटबल हेरेका थिए […]
काठमाडौं: आइतबार प्रकृति चन्द सदाझैं किताब कापी बोकेर स्कुल निस्किइन। अलि ढिला भएकाले कोहलपुरमा बुबाममीले सञ्चालन गरेको खाजाघरमा खान आएका एक विद्यार्थीकै स्कुटरमा प्रकृति स्कुल लागिन् । स्कुल गेट अगाडि प्रकृति ओर्लिइन् । स्कुलको नजिकै पर्छ हाइवे । बतासिएर आएको ना२ख ९४५९ नम्बरको ट्रकले प्रकृतिलाई ठ’क्कर दियो । […]
काठमाडौँ । नेपाल टेलिभिजनबाट पुनः प्रसारणमा आइरहेको चर्चित टेलिश्रृङ्खला मेरी बास्सै पुनः प्रसारणमा आएदेखि नै यसको चर्चा चौतर्फी चल्न थालेको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारणमा आएका धेरैजसो हाँस्य श्रृङ्खलाहरु बन्द भएको समयमा पनि प्रसारणमा आइरहेको मेरी बास्सैले भने अहिले हाँस्य ब्यङ्ग्यसँगै सामाजिक विषयवस्तुहरूमा पनि आफ्ना सामाग्रीहरू तयार पारिरहेको […]